Kumwe Shot & 2K Mould Vagadziri uye Vatengesi - China Imwe Pfuti & 2K Mould Fekitori
Jekiseni muforoma chikamu chinopa chimiro uye saizi kuchinhu chepurasitiki panguva yekuumba. Kunyangwe chimiro chekuumbwa chingasiyana zvichienderana nerudzi uye mashandiro epurasitiki, chimiro uye chimiro chepurasitiki chigadzirwa, uye mhando yejekiseni muchina, yakakosha chimiro yunifomu.
Dzimba jekiseni Kuumbwa kambani
Mould dhizaini nekugadzira zvakabatana zvakanyanya nekugadziriswa kwepurasitiki. Kubudirira kana kukundikana kwekugadziriswa kwepurasitiki kunoenderana kusvika pamwero mukuru pane iyo dhizaini dhizaini uye mhando yekugadzira mhando, nepo pulasitiki yekuumbwa dhizaini yakavakirwa pane chaiyo epurasitiki chigadzirwa dhizaini.
High yepamusoro midziyo epurasitiki jekiseni muforoma
Maturusi nezvigadzirwa zvatinoshandisa muhupenyu hwezuva nezuva, kubva pachigadziko chemushini chishandiso, yekunze casing yemuchina, kune diki sikuruu, bhatani uye kesi yemidziyo yakasiyana siyana yemumba, ese ane hukama hwepedyo nekuumbwa.
2K Double Die Mould Plastic jekiseni Mould
2K jekiseni Kuumbwa: chigadzirwa chigadzirwa jekiseni kuumbwa ne 2 akasiyana epurasitiki zvinhu kana 2 mavara: inoshanda uye mari
Chii chinonzi 2k jekiseni muforoma?
2K Jekiseni Mould, dzimwe nguva inozivikanwa se2 zvinhu 2 kupfura kuumbwa kana 2 ruvara kuumbwa, inyanzvi yekugadzira nzira inoshandiswa kugadzira zvikamu zvakaoma zvakaumbwa kubva kuzvinhu zviviri zvakasiyana .....
2K Jekiseni rinoitwa pane mumwe muchina wakagadzirirwa kuita majekiseni maviri mune imwechete kutenderera.
Jekiseni Kuumbwa ndiyo nzira yekugadzira tsika epurasitiki zvikamu nekubaya zvinhu zvakaumbwa zvepurasitiki pakudzvinyirira kwakanyanya kuita simbi muforoma. Kunge mamwe mafomu epurasitiki kuumbwa, mushure mekunyungudutswa kwepurasitiki muforoma, iyo chando inotonhorera uye yakavhurwa kuratidza chikamu chepurasitiki chakasimba.
Izvi zvinotevera zvishanu zvinhu zvakakosha mukugadziriswa kwekaviri-kupfura kuumbwa:
1. Kuumbwa kweMuvhu uye kuongorora kwechigadzirwa Pamberi peforoma dhizaini, kuongorora kweforoma uye kuongorora kwechigadzirwa kunofanirwa kusanganisira nechitarisiko, saizi uye chimiro kudzivisa kusanzwisisika kwemaviri-eruvara dhizaini dhizaini.
2. Mould chimiro Akanaka muforoma dhizaini haifanire chete kusangana nezvinodiwa nevatengi, asiwo chengetedza mutengo, kudzikisira kuoma kwekugadzirisa, kupfupisa nguva yekugadzirisa yevatengi. Kuti tiite izvi, hatifanirwe chete kugaya zvizere zvinodiwa nevatengi, asi zvakare tinzwisise zvizere jekiseni muchina, chakuumbwa chimiro, kugadzira tekinoroji uye kugadzirisa kugona kweforoma fekitori pachayo.
3. Kusarudzwa kwemidziyo Kusarudzwa kwemidziyo kwakakosha zvikuru pakuumba zvakapetwa kaviri. Iyo inofanirwa kusangana nezvinodiwa zvekupfeka kuramba, kuomarara, kuneta kuputsika kuita, kupisa kwekuita kwakanyanya, kutonhora uye kupisa kuneta kuramba, ngura kuramba.
4. Zvikamu zvekugadzirisa uye gungano Kunze kune zvakafanira dhizaini uye kusarudzwa kwezvinhu, iko kurongeka kwekaviri-kupfura kuumbwa kwakakoshawo mune inotevera yekugadzirisa uye gungano. Naizvozvo, kuitira kuverengera kunyatso kugadziriswa kweforoma, yakakwira-chaiyo yekumberi yekugadzirisa michina uye vane ruzivo mahunyanzvi vanofanirwa.
5. Kuedzwa kweMold Kuti udzivise kutambisa nguva nedambudziko panguva yekugadzirwa kwakawanda, zvinofanirwa kugadzirisa uye kudzora akasiyana mamiriro ekugadzirisa mushure mekunge mold yaunganidzwa kuti uwane yakanyanya kunaka tembiricha uye kumanikidza mamiriro. Mukuyedza kwacho, zvinodikanwa kutevedzera matanho anoshanda ekunyora uye kurekodha anobatsira ma technical parameter mune yekuyedza maitiro kuita kuti kugadzirwa kwakawanda kwechigadzirwa.
Prototype Mould Vagadziri, Tsika Mould, Mould Factory, Mould Vagadziri, Jekiseni Kuumbwa Nesimbi Inoisa, Plastic Kuisa richigadzirisa,